युनियन हाइड्रोको आईपीओ भदौ १२ गतेसम्म विक्रीमा | गृहपृष्ठ
Home लगानी युनियन हाइड्रोको आईपीओ भदौ १२ गतेसम्म विक्रीमा
on: २८ श्रावण २०७५, सोमबार १३:२२ लगानी
युनियन हाइड्रोको आईपीओ भदौ १२ गतेसम्म विक्रीमा
साउन २८, काठमाडौं (अस) । साउन १४ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानिय वासिन्दाका लागि जारी गरेको युनियन हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ भदौ १२ गतेसम्म विक्रीमा रहने भएको छ । कम्पनीले छिटोमा साउन २८ र ढिलोमा भदौ १२ गतेसम्म विक्री खुला हुने सुचना जारी गरेको थियो । छिटो अवधिमा तोके बमोजिम आवेदन नपरेकाले ढिलो मितिसम्म विक्री खुला हुने विक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । क्यापिटलका अनुसार हालसम्म १० प्रतिशत मात्र आवेदन परेको बताएको छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित लमजुङ जिल्लाको मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर ८, ९, १०, वेशिशहर नगरपालिका वडा नम्बर ५, सुन्दर बजार नगरपालीका वडा नम्बर ११ र कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर १ तथा प्रभावित क्षेत्र लमजुङ जिल्लामा स्थायी वासिन्दाहरुका लागि कम्पनीले ७ लाख ५० हजार कित्ता शेयर जारी गरेको हो ।
यस आईपीओमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतमा ३ हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस आईपीओ खरीदका लागि सिभिल बैङ्क मालिङ्ग, बेसिशहर, गौँडा, भुलभुले, रैनास लमजुङ शाखा कार्यालय, कैलाश विकास बैङ्क भोर्लेटार, लमजुङ, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, भोर्लेटार, लमजुङ, कामना सेवा विकास बैङ्क, दुइपिप्ले लमजुङ, ओमडेभलपमेण्ट बैङ्क, भोटेओडार र वेसीशहर, लमजुङ, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था, भोर्लेटार, लमजुङ , सनराइज बैङ्क, वेसीशहर र युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडको आयोजना स्थल मध्ये नेपाल नगरपालिका ८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । यस आईपीओ विक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ ।
कम्पनीले लमजुङ जिल्लाको वडा नम्बर ८ मा ३ मेगावाट क्षमताको मिदिम खोला जलविद्युत आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई गत माघ १५ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन समेत शुरु गरिसकेको छ । हाल रू. ३८ करोड ३७ लाख ४५ हजार चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीको आयोजना प्रभावितलाई रू. ७ करोड ५० लाख बराबरको आईपीओ जारी गरेपश्चात रू. ४५ करोड ८७ लाख ४५ हजार पुग्नेछ ।
स्थानियलाई बाँडफाँट गरेपश्चात कम्पनीले कर्मचारी सहित सर्वसाधारणका लागि रू. २९ करोड १२ लाख ५५ हजार बराबरको साधारण शेयर जारी गर्ने जानकारी दिएको छ । सर्वसाधारणलाई जारी गरेपश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७५ करोड पुग्नेछ । सो पश्चात कम्पनीमा संस्थापकको ५१ दशमलव १६६, स्थानियको १० र सर्वसाधारणको ३८ दशमलव ८३४ शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ । कम्पनीले स्थानियलाई जारी गर्ने यस आईपीओका लागि इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट कमजोर आधार जनाउने ग्रेड ५ प्राप्त भएको छ ।